Ireto ny sarontava Disney izay havoaka amin'ny Jolay | Famoronana an-tserasera
Ireo sarontava tena manompo izay mendrika azy ireo, dia lasa singa iray hafa amin'ilay setra anaovan'ny olona an-tapitrisany. Disney, mahafantatra izany, dia efa hanomboka andalana sarontava miaraka amin'ireo olo-malaza fanta-daza indrindra amin'ny sarimihetsika sy horonan-tsary nataony.
ny mpilalao sarimihetsika toa an'i Monsters Inc. na Minnie Mouse tenany ary Mickey, dia mpandray anjara mavitrika amin'ity andiana sarontava ity izay manana ny vidiny € 19.00. Andao jerena ny sasany amin'ny antsipiriany momba ireto sarontava ireto izay tsy hamela olona tsy hiraharaha.
Sarontava izay nanjary filàna tanteraka sorohy ny fihanaky ny areti-mandringana ny an'ny COVID-19 izay nitarika anay hijanona tao an-tranonay.
Raha efa mahita marika mampiditra ny azy ireo isika saron-tava amin'ny tsipika lamaodyoIzao dia Disney izay nandefa tranokala iray ahafahantsika mahita ireo tarehin-tsoratra rehetra ireo izay hoentina any amin'ny fivarotany mba hahafahan'ny $ 19 afaka mahazo iray isika.
Toa ny volana jolay izao no hametrahana ity andiana sarontava Disney ity misy refy telo ary izany dia mety ho tonga fanomezana lehibe ho an'ny olon-tiantsika. Ankoatry ny sarimihetsika Disney sy ny sarimihetsika Pixar, dia mahita sarimihetsika Star Wars, ary koa ny endri-tsoratra Marvel.
Raha tonga any karohy ny tranonkalany, azo antoka fa hahita iray mifanaraka amin'ny tsirontsika isika na ilay toetra ankafizinay izay nihomehezanay fatratra. Etsy ankilany, saron-tava mahafinaritra tokoa i Baby Yoda's; ary izany dia avy amin'ny zavatra fantatsika roa andro lasa izay momba ilay hevitra tavela tao amin'ny inkwell, soa ihany izahay.
ny sasany Sarontava Disney tonga tamin'ny Jolay ary azo antoka fa ho lany tahiry izy ireo amin'ny fotoana hahatongavan'ny andiany voalohany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ho avy tsy ho ela ireo sarontava misy endri-tsoratra Disney malaza indrindra